Tan Skin WM Dolls 162 CM Ezigbo Mmekọahụ Doll Aurora
Stylekpụrụ bebi ndị Europe,F cup ụmụ bebi mmekọahụ,Ebughibu na umu nwanyi
Aurora 162 CM F-Cup WM Tan Skin TPE Mmekọahụ
Save 24%$ 1,648.85$ 2,144.99
Aurora bụ nwa bebi TPE nke nwoke na nwanyị nwere elu 162 cm. Anọ m n'ụlọ enyi m nwoke ma anyị na-ekwu maka ịhụnanya. O kwuru na ọ hụrụ m n'anya, ọ na-echekwa na oge kwesịrị. M na-eche banyere ya ogologo oge. Ejiri m uwe mwụda spandex dị mkpụmkpụ na obere sket m, ọ dịghị ihe ọzọ. Enweghị uwe ime. Ekwetara m ngwa ngwa ma wụkwasị n’elu ihe ndina ahụ. Anyị niile bụ ụmụ agbọghọ. O bu ụzọ yipụ uwe elu m, fesaa m n’ara, ma rachakwaara m nnụnnụ tit gburugburu. Ọ na-eme m ara.